HRLHA: 2 Months Murders, Tortures, Abductions and Imprisonments -
One Response to HRLHA: 2 Months Murders, Tortures, Abductions and Imprisonments
Jimma December 12, 2016 at 12:23 am #
Galatoomi obbo Gaaroma. Akkuma odessa argatteen walitti qabde ummataafis adungyaafis beksisuun (update) gochun kee kuni gaaridha. Midhaan falammin hidhamun dararamuun “Southeast Oromia” kessaalle kan hin himamne waan jiranif itti yaadi. Dhugaadha midhaan ganda hunda sentetti. Akka odefanno bakka hundaa argatutti hojjachun gaaridha. “Information-Outlet” qabnus jabeefachuun gaaridha. Kalatti hundatti-xiqqaatu “at district level” namni kana hojjatu/ummataaf gabaasu barbaachisaadha. Akkaataa odeessi kamu “information outlet” qabnu hundaaf dhaqabu irrattis hojjatamu qaba. Waantan amma argaa jiru tokko hiriira nagaa biyya ambaa kanattifi biyyatti waanuma hojatame hinjiru eega Dr. Mararaa hidhani asi. Mormii ijjanno qabnu seeran irra deebinee hojjachu qabna. Waamichi amaantana ummataafi qerroo naannoo Amboof dabraa jiru argu (bilisummaa.com) irratti akka waamicha qerroo hundaaa (Oromiyaatif) ta’u dhaamsa dabarsu barbaachisaadhas.